Showing ३१-४० of ३९४ items.
यी तेलुगू अभिनेत्रीले किन उतारिन् सबै सामू कपडा ?
मुम्बई/ ‘आफ्नो लडाईंमा म बेसहारा हुँ किनभने मेरो दुःख कसैलाई देखाइदिँदैन । जसको कारण म यत्रो ठूलो कदम उठाउन बाध्य भएँ र सार्वजनिक रुपमा कपडा उतारेँ ।’ यो भनाई तेलुगू अभिनेत्री श्रीरेड्डी मल्लिडीको हो । तेलुगू फिल्म उद्योगमा कथित यौन उत्पीडनबिरुद्ध आफ्नो विरोध जनाउँदै पछिल्लो हप्ता हैदराबादको फिल्म नगरमा मूभी आर्टिस्ट एसोसिएशनका अगाडी श्रीरेड्डीले आफ्नो कपडा उतारेकी थिइन् । श्रीरेड्डीका अनुसार आफ्नो कुरा सुनाउन र सरकारसँग आफ्नो मागबारे जवाफ लिन उनीसँग यो मात्र विकल्प बाँकी थियो । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘जब फिल्मी दुनियाँका मानिसहरु मलाई मेरो नग्न तस्विर र भिडियो पठाउन भन्छन् भने म सार्वजनिक रुपम
किन शाहिदले खोसे अजुर्नको खुसी ?
कहिले समय अभाव त कहिले कलाकारले भाउ नदिदा पनि यस्तो हुने गरेको देखिएको छ । यस्तै भयो नायक अजुर्न कपुर र शाहिद कपुरबीच पनि । बलिउडमा पनि फिल्ममा सुरुवातमा एउटा नायकको चर्चा र त्यसपछि अर्को नायक अनुबन्धित हुनु नौलो रहेन । निर्माण पक्षसंग उनले अजुर्न फिल्ममा काम गर्ने भए आफुले फिल्मबाट हात झिक्ने अडान लिएपछि निर्माण टिमले बाध्य भएर निर्देशकको चाहाना अनुरुप शाहिदलाई लिएका छन् । सन्दिप शाहिद बिना एक पाईला अघि नबढेपछि अन्तत यो सुपरहिट फिल्मको हिन्दी रिमेक अजुर्नको हातबाट फुत्किएको छ । साउथको चर्चित फिल्म “अजुर्न रेड्डी” फिल्मको हिन्दी रिमेकमा अजुर्न लगभग फाईनल भईसकेका थिए तर साउथ फिल्मका निर्देशक
प्रकाशित मितिः बैशाख १६, २०७५
हजार करोडकाे 'महाभारत'मा द्रौपदी बन्दै दीपिका !
एजेन्सी/ बलिउड अभिनेता आमिर खानको मुख्य अभिनयमा बन्न लागेका फिल्म 'महाभारत'को चर्चा यतिबेला निकै चुलिएको छ। करिब एक हजार करोड रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको फिल्मका लागि केही प्रोडक्सन हाउसले यतिबेला धमाधम काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय फिल्म पद्मावतमा दीपिकाले निर्वाह गरेको भूमिकाले निम्त्याएको विवाद सेलाउँदै गर्दा पुनः पौराणिकतासँग जोडिएको फिल्ममा दीपिकाको आगमन हुने नहुनेमा शंका उत्पन्न भएको हो। यससँगै सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्रीकृष्णको भूमिकामा देखिन लागेका आमिरको पनि विरोध सुरु भएको छ। महाभारत आमिर अभिनित सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको पौराणिक कथामा आधारित फिल्म हो। फिल्ममा आमिर खान श्रीकृ
प्रकाशित मितिः बैशाख १५, २०७५
सुटिङका क्रममा घाइते भइन् प्रियंका
एजेन्सी/अभिनेत्री प्रियंका चोपडा घाइते भएकी छन्। उनी अमेरिकन टिभी शो ‘क्वान्टिको’को तेस्रो सिजनको सुटिङका क्रममा घाइते भएकी हुन्। घाइते भएको कुरा स्वयंम प्रियंकाले आफ्नो ट्वीटरबाट गरेकी हुन्। उनको घुँडामा चोट लागेको छ। उनको चोट ठिक हुन ३ साता लाग्ने उनले ट्वीटमा उल्लेख गरेकी छन्।
ऋतिक रोशनले पाएका ३ अवसर
मुम्बई/ बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनले उनकाे जिन्दगीमा धेरै कुरा झेलेका छन् । उनी आफ्नो जिन्दगीले धेरै कुरा सिकाएको कुरा बताउछन्। ऋतिक रोशनले समाचार एजेन्सी आइएएनएसलाई यस्ता कुरा बताएका छन् - ‘यदि तपाई ऋतिक रोशनलाई जोडेर हेर्नुको साटो एउटा यात्राका रुपमा हेर्नुभयो भने धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ ।’ ऋतिकको जिन्दगीका ५ घटना, जुन घटनाले उनलाई हिम्मत मिल्योः – उनी २१ वर्षका थिए । सम्भवत देशको सबैभन्दा राम्रो डाक्टर उनको सामुन्ने बसेका थिए । उनले बताएका थिए कि, ऋतिकको जेनेटिक्समा त्यो चिजले सबै गर्नका लागि तागत दिन्थ्यो, त्यही चिज नभएको डाक्टरले सुनाए । एक अभिनेताले गर्न सक्ने स्थिति काम गर्न सक्दैनस् भने
प्रकाशित मितिः बैशाख १२, २०७५
६७ वर्ष अघि गरिएको थियो बलिउडको पहिलो बोल्ड फोटोसुट, नायिकाकाे यस्ताे पोज
आजको जमानामा कुनै नायिकाले बोल्ड फोटोसुट गरे त्यो खासै नौलो कुरा मानिँदैन । लगभग सबै चर्चित नायिक म्यागजिनको बोल्ड फोटोसुटको कभर पेज बनेर चर्चा बटुल्छन् । तर यस्तो सन् १९५१ मा हुने गर्दथ्यो भन्ने बारे सायद कसैले सोच्नुभएको छैन होला । जतिबेला नायिका फिल्ममा काम गर्न हिच्किचाउँथे त्यतिबेला एक नायिकाको बोल्ड फोटोसुटले हंगामा मच्चाएको थियो । यस्तै हंगामा मच्चाउने नायिका थिइन् बेगम पारा । बेगम पाराले लाइफ म्यागजिनका लागि एक बोल्ड फोटोसुट गराएकी थिइन् । यो फोटोमा उनले सेतो साडी लागएर र चुरोट तानेको यस्तो पोज दिएकी थिइन् कि उनी बलिउडकी फर्स्ट Bombshell र Pin Up Girl नामले चर्चित बनिन् । बेगम पाराको
सलमानपछि भारतमा अर्का कलाकारलाई पनि जेल सजाय
भारतीय फिल्म उद्योगका चर्चित कमेडियन राजपाल यादवलाई ६ महिनाको जेल सजाय भएको छ । दिल्लीको कडकडडू अदालतले उनलाई ५ करोड रुपैयाँको जालसाजी मुद्दामा सजाय सुनाएसँगै अदालतले उनलाई जमानतपनि दिएको छ । राजपालको विरुद्धमा सात आरोप दर्ता छन् जसमा हरेक केसका लागि उनीमाथि १.६० करोड को सजाय तोकिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनको यो प्रकरण सन् २०१० को हो । राजपालमाथि ५ करोडको ऋण नचुकाएको आरोप लागेको थियो ।
मुम्बई/ आँखा झिम्याउने कलाले चर्चामा आएकी प्रिया प्रकाशले फेरि अर्को फन्डा सार्वजनिक गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक उनको नयाँ भिडियो क्लिपमा उनले मोबाइल हेर्दै आफ्ना परेलालाई आकर्षक ढंगले चलायमान बनाएकी छिन् । भिडियो क्लिप्समा उनीसँगै डेब्यू फिल्म ‘ओरु अदार अब’ का उनको नायक रोशन अब्दुल समेत देखिएका छन् । जतिजति उनको फिल्मको रिजिल मिति नजिकिँदै गरेको छ यतिनै उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । फिल्म चलाउनको लागि मानिसहरुलाई इम्प्रेस पार्ने उनको यो फर्मुला भएको बताइएको छ । उनको भिडियो क्लिप्स फिल्म प्रोमोशनको समयमै रेकर्ड गरिएको ठानिए
प्रकाशित मितिः बैशाख १, २०७५
काठमाडौं/ बलिउडकी लेडी अमिताभ बच्चन श्रीदेवी त रहिनन् तर उनको भूमिका भने गर्व गर्न लायक ठहरिएको छ । श्रीदेवीले राष्ट्रिय फिल्म अवार्डमा चलचित्र ‘माम’ बाट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जितेकी छिन् । श्रीदेवीको गत महिना मृत्यु भएको थियो । चलचित्र न्यूटनले बेष्ट हिन्दी फिल्म अवार्ड जित्दा यही फिल्मका अभिनेता पंकज कपूरले स्पेशल अवार्ड जितेका छन् । त्यसैगरी बाहुबली–२ ले बेष्ट एक्सन डाइरेक्टर तथा बेष्ट स्पेशल इफेक्ट मुभीको अवार्ड जित्दा बेष्ट एडिटिङ अवार्ड विलेज रकस्टारबाट असम भाषाले जितेका छन् ।
पक्का भयो दिपिका र रणबीरको विवाह
रामलीला, पद्यमावत, बाजिरावो मस्तानी जस्ता सुपरहिट चलचित्रमा सँग–सँगै काम गरेका बलिउड अभिनेता रणबीर सिंह तथा अभिनेत्री दिपिका पादुकोणले आफनो प्रेम सम्बन्धलाई अब अब पुर्ण विराम लगाउने निधो गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमलाई अब विवाहमा परिणत गर्ने निश्चित गरेका हुन । यद्यपि उनीहरु अहिले आ–आफ्नो चलचित्रमा व्यस्त भएता पनि आफ्नो विवाहको लागि पनि तयारी भने गर्न थालिसकेका छन् । लामो समयदेखि उनीहरुको विवाहको चर्चा चलेता पनि उनीहरुले आफ्नो विवाहको वारेमा कुनै चर्चा गरेका थिएनन् । तर अब भने उनीहरुले आफ्नो विवाहको मिति नै तय गरिसकेका छन् । उनीहरु यही वर्षको सेक्टेम्वरदेखि डिसेम्वरसम्ममा विवाह बन्धनमा ब